Dhacdo Naxdin leh Gabar yar oo Soomaali Kufsi iyo Dil loogu geystay xaafada Islii ee magaalada Neyroobi – Walaal24 Newss
Dhacdo Naxdin leh Gabar yar oo Soomaali Kufsi iyo Dil loogu geystay xaafada Islii ee magaalada Neyroobi
March 1, 2019	1	By walaal24
Boliiska Dalka Kenya ayaa Afar Haween ah u taxaabay Xabsiga, kuwaas oo loo haysto kufsi iyo dil loo geystay Ismahaan C/salaam oo Maalmo ka hor ka dhacay Xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi.
Haweenka la qabtay ayaa waxaa ka mid ah Ismahaan Eeddadeed oo lagu Magacaabo, Nadiifo Maxamed, taas oo loo malaynayo in ay soo maleegtay shirqoolka lagu dilay Gabadha.
Gabadhan oo kasoo jeedda Soomaaliya, ayaa kufsiga iyo Jir-dilka lagu sameeyay ka sokoow waxaa loo Isticmaalay Aashito, sida lagu daabacay Maanta oo Jimca ah Wargeyska The Star ee kasoo baxa Dalka Kenya.
Ismahaan C/salaam, oo ahayd 14 jir dhigata Fasalka Todobaad ee Dugsiga dhexe ayaa ku noolayd Guriga Eeddeadeed Nafiifa xilligii la kufsanayay, sida ay sheegtay hay’adda xuquuqul Insaanka u doodad ee Florence Kanyua.
Guriga ay ka tirsanayd Ismahaan, oo ay sidoo kale ku noolaayeen, Rag badan, Haween iyo Carruur ayaa dhalisay tuhumada la xiriirta in Gabadhan keligeen la kufsado, dabeetana la dilo, sida ay Boliisku sheegeen.
Waxa kale oo ay Boliisku shaki ka muujiyeen sababka keentay in la qariyo Meydka Gabadha oo la la’aa muddo Afar Cisho ka hor inta aan la helin Maalintii Sabtida.
Waxaa weli soconaya baarista Kiiska la xiriira Kufsiga iyo dilka Allaha u naxariistee Ismahaan C/Salaan, iyadoo Dadkii Gacanta ka geystayna la marin doono caddaaladda sida ay sheegeen Saraakiisha Boliiska Kenya.
Labo Qarax oo aad u xoogan kana dhacay wadada Maka Al mukarama oo sababay dhimasho iyo dhaawac
Wasiirka Arimaha Gudaha oo ka hadlay muhiimadda Golayaasha deegaanka ee Dalka
Wasiirka Warfaafinta XFS oo la kulmay madaxda warbaahinta gaarka loo leeyahay
Madaxweyne Famaajo oo Dalka dib ugu soo laabtay ka dib uu ka qeybgalay shirkii Qaramada Midoobay
Dhageyso: Faah faahin Ciidamadii jabsadaan Baqaarka hubka ee Xerada Jenaraal Gordan iyo sidey wax u dhacen